A' Design Awards ayaa lagu dhawaaqay
Abaalmarinta caalamiga ah ee A' Design Award ayaa lagu dhawaaqay naqshadaha sanadka ugu fiican dhammaan qaybaha naqshadeynta.
A' Design Award (http://www.designaward.com), abaal-marinaha naqshadaynta caalamiga ah ee xukuma Qiimaynta Nakhshadeynta Adduunka, ayaa ku dhawaaqday natiijada tartankeedii ugu dambeeyay ee naqshadaynta.
Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxay ku dhawaaqday kumanaan nashqado wanaagsan, alaab si wanaagsan loo nashqadeeyay, iyo mashruucyo dhiirigelinaya guuleyayaal ahaan. Naqshado abaal-marineed oo dhawaan lagu dhawaaqay ayaa lagu daabacay onlayn ee liiska ku-guulaystayaashii A' Design Award.
Abaalmarinta A' Design Award waxaa si taxadar leh u qiimeeyay guddi xeerbeegti ah oo saameyn caalami ah leh kaasoo isu keenay aqoonyahanno caan ah, saxafiyiin saameyn ku leh, xirfadleyda naqshadeynta iyo hal-abuurro khibrad leh oo ka kala yimid daafaha caalamka.
Xeerbeegtida Abaalmarinta Naqshadeynta ayaa si weyn u fiirsaday soo bandhigida iyo faahfaahinta mashruuc kasta. Xiisaha abaalmarinta naqshadeynta ayaa ahayd adduunka oo dhan, iyadoo la magacaabay dhammaan qaybaha warshadaha waaweyn, iyo gelitaanka tiro badan oo dalal ah.
Dadka xiiseeya naqshadaynta wanaagsan iyo saxafiyiinta adduunka oo dhan ayaa si xushmad leh loogu martiqaaday inay helaan dhiirigelin cusub oo naqshadayn ah oo ay ogaadaan isbeddellada ugu dambeeyay ee fanka, qaab-dhismeedka, nashqadaynta iyo tignoolajiyada iyagoo booqanaya bandhigga abaalmarinta A' Design Award. Saxafiyiinta iyo kuwa xiiseeya naqshadeynta ayaa sidoo kale ku raaxaysan doona wareysiyada ay ku jiraan naqshadeeyayaasha abaalmarinta ku guuleystay.
Natiijooyinka Tartanka Naqshadeynta waxaa lagu dhawaaqaa sannad kasta bartamaha Abriil, marka ugu horreysa ee la abaalmariyo kuwa ku guuleysta. Ku dhawaaqida natiijooyinka dadwaynaha ayaa imanaya dabayaaqada bisha May badhtamaha.
Alaabooyinka, mashaariicda iyo adeegyada ugu fiican aduunka oo muujiya nakhshad sare, tignoolajiyada iyo hal-abuurka waxa lagu abaalmariyaa Abaalmarinta Nakhshadeynta A'. Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxay astaan u tahay heerka sare ee naqshadeynta iyo hal-abuurka.
Waxaa jira shan heerar oo kala duwan oo kala soocidda abaal-marinaha naqshadaynta:
Platinum: Magaca Abaalmarinta Naqshadeynta ee Platinum A waxaa la siiyay naqshado heer caalami ah oo aad u wanaagsan oo muujinaya tayada naqshadaynta oo aad u saraysa.
Dahab: Magaca Abaalmarinta Naqshadeynta Dahab A' waxa la siiyaa nashqado heer caalami ah oo aad u wanaagsan oo muujinaya tayada naqshadaynta oo aad u saraysa.
Silver: Magaca Abaalmarinta Naqshadeynta Silver A' waxaa la siiyaa naqshado heer caalami ah oo aad u wanaagsan oo muujinaya heer sare oo xagga naqshadeynta ah.
Bronze: Magaca Abaalmarinta Naqshad ee Bronze A' waxa la siiyaa nashqado aad u wanaagsan oo muujinaya heer sare xagga naqshadaynta.
Birta: Magaca Abaalmarinta Naqshadeynta Birta A waxaa la siiyaa nashqado wanaagsan oo muujinaya heer sare xagga nakhshadeynta.
Naqshadayaasha, farshaxanada, naqshadeeyayaasha, istuudiyooyinka naqshadaynta, xafiisyada dhismaha, wakaaladaha hal abuurka leh, sumadaha, shirkadaha iyo machadyada ka socda wadamada oo dhan ayaa sanad walba loogu yeeraa inay ka qayb qaataan abaal marinta iyagoo magacaabaya shaqooyinkooda ugu wanagsan, mashaariicda iyo alaabooyinka si abaal marin loo tixgeliyo.
Abaalmarinta A' Design Awards waxaa lagu bixiyaa noocyo kala duwan oo tartan ah, kuwaas oo ka kooban qaybo-hoosaadyo badan.
Qaybaha Abaalmarinta Nakhshadeynta A' waxa lagu ururin karaa shan qaybood oo waaweyn:
Abaalmarinta Nakhshad Wanaagsan ee Naqshadaynta: Qaybta abaal-marinta naqshadaynta boosaska waxay aqoonsanaysaa nashqadaha wanaagsan ee dhismaha, nakhshadeynta gudaha, naqshadaynta magaalooyinka iyo naqshadaynta muuqaalka.
Abaalmarinta Nakhshad Wanaagsan Warshadaha: Qaybta abaal-marinta naqshadaynta warshaduhu waxay aqoonsanaysaa nashqadaha wanaagsan ee naqshadaynta alaabta, nashqada alaabta guriga, nakhshad nalka, nakhshadaynta qalabka, nakhshad baabuur, naqshadaynta baakadaha iyo naqshadaynta mishiinada.
Abaalmarinta Nakhshad Isgaadhsiin Wanaagsan: Qaybta abaal-marinta nakhshad isgaadhsiinta waxay aqoonsanaysaa nashqadaha wanaagsan ee naqshadaynta garaafyada, naqshadaynta isdhexgalka, naqshadaynta ciyaarta, farshaxanka dhijitaalka ah, sawir-qaadista, sawir-qaadista, xayaysiinta iyo naqshadaynta suuq-geynta.
Abaalmarinta Nakhshad Wanaagsan: Abaalmarinta naqshadaynta moodada waxay aqoonsanaysaa naqshadaha wanaagsan ee naqshadaynta dahabka, nakhshad kaabka moodada, dharka, kabaha iyo naqshadaynta dharka.
Abaalmarinta Nakhshad Wanaagsan: Qaybta abaal-marinta nakhshadeynta nidaamka waxay aqoonsanaysaa nashqadaha wanaagsan ee nakhshadeynta adeegga, istaraatiijiyadda naqshadeynta, naqshadeynta istiraatijiyadeed, naqshadeynta qaabka ganacsiga, tayada iyo hal-abuurka.
Abaalmarinada u qalma ayaa lagu martiqaadayaa inay ka soo qaybgalaan xaflad aad u qurux badan oo habeenimo iyo abaal-marinno lagu guddoonsiinayo dalka Talyaaniga, halkaas oo loogu yeedhi doono xaflad ay ugu dabbaaldegayaan guusha ay gaadheen, isla markaana ay soo ururiyeen koobabkii, shahaadooyinkii abaal-marinaha iyo buugaagta sannadlaha ah.
Naqshado abaal-marinno ah ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay bandhig naqshadeedka caalamiga ah ee Talyaaniga. Ku guulaystayaasha u qalma Abaalmarinta Nakhshadeynta A' waxa la siiyaa abaal marinta la jecel yahay ee A' Design Prize.
Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxaa ka mid ah xiriiro xiriir dadweyne, dacaayad iyo adeegyo shati siinta si ay gacan uga geystaan abuurista qaddarin iyo wacyigelin caalami ah ee naqshadaha wanaagsan ee ku guulaysta abaal-marinaha.
Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxaa ka mid ah siinta shatiyeynta A' Abaalmarinta Abaalmarinta Naqshad ee Logo abaal-marinaha xaqa u leh si looga caawiyo inay kala soocaan alaabtooda naqshadeynta wanaagsan, mashaariicda iyo adeegyada alaabada kale, mashaariicda iyo adeegyada suuqa.
Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxaa ka mid ah xiriirka caalamiga ah iyo kuwa luqadaha badan leh, adeegyada xayeysiinta iyo xayeysiinta si ay u caawiyaan naqshadaha ku guulaysta abaal-marintooda si ay u helaan soo-gaarsiin caalami ah, suuqgeyn iyo meeleyn warbaahin.
Abaalmarinta A' Design Award waa dhacdo naqshadeyn sanadeed. Gelida daabacaadda soo socota ee Abaalmarinta Nakhshadeynta iyo Tartanka A' ayaa durba furan. Abaalmarinta Naqshadeynta A' waxay aqbashaa soo-gelinta dalalka dhammaan warshadaha. Dhinacyada danaynaya waa lagu soo dhawaynayaa inay soo magacaabaan naqshado wanaagsan oo loogu talagalay tixgelinta abaal-marinaha ee shabakada A' Design Award.
Liiska xubnaha xeerbeegtida ee hadda jira, shuruudaha qiimaynta naqshadaynta, wakhtiga kama dambaysta ah ee tartanka naqshadaynta, foomamka gelitaanka tartanka naqshadaynta iyo habraacyada soo bandhigida abaalmarinta naqshadaynta ayaa laga heli karaa shabakada A' Design Award.
Ku saabsan Abaalmarinta A' Design
Abaalmarinta A' Design Award waxay leedahay hadaf samafal ah oo lagu hormarinayo bulshada naqshad wanaagsan. A' Abaalmarinta Naqshadeynta waxay rabta in ay abuurto wacyigelinta dhaqamada naqshadeynta wanaagsan iyo mabaadi'da adduunka oo dhan, iyo sidoo kale in la shido laguna abaalmariyo hal-abuurka, fikradaha asalka ah iyo abuurista fikradda dhammaan qaybaha warshadaha.
Abaalmarinta A' Design Award waxay rabta inay horay u sii riixdo xudduudaha sayniska, naqshadaynta iyo tignoolajiyada iyadoo la dhisayo dhiirigelin xooggan hal-abuurayaasha, hal-abuurayaasha iyo sumadaha adduunka oo dhan si ay ula yimaadaan badeecooyin iyo mashaariic heersare ah oo bulshada faa'iido u leh.
Abaalmarinta A' Design Award waxay rajaynaysaa inay kor u qaaddo badeecooyin iyo mashruucyo heersare ah oo bixiya qiimo dheeri ah, kororka tamarta, shaqaynta cusub, hagaajinta bilicda, hufnaanta gaarka ah, waaritaan ka wanaagsan iyo waxqabadka sare.
Abaalmarinta A' Design Award waxay rabta in ay noqoto xoog wadid xoogan oo ku wajahan abuurista mustaqbal wanaagsan oo leh nashqad wanaagsan, waana sababta Abaalmarinta A' Nakhshad gaar ahaan ay ka kooban tahay tiro badan oo adeegyo ah si kor loogu qaado naqshadaha wanaagsan ee la abaalmariyey.
Eeg ku guulaystayaasha A' Design Awards